Porn nwere ike ịbụ ịṅụ ọgwụ ọjọọ Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Health Ịṅụ ọgwụ ọjọọ
Nnyocha a mere n'oge na-egosi na omume na ọ bụghị naanị ihe pụkwara ịṅụ ahụ. Ha nwere ike ime ka ụdị mgbanwe ahụ gbanwee n'ụgwọ ọrụ ụbụrụ nke cocaine ma ọ bụ mmanya ma ọ bụ ọgwụ nicotine na-emepụta. (Hụ okpuru). Àgwà ndị a na-agụnye ịgba chaa chaa, ịntanetị, na mgbasa ozi dị ka Facebook ma eleghị anya na-akpa na ngwa ngwa dị ka Tinder ma ọ bụ Grindr.
Nke a bụ a akwụkwọ site na ndị ọkà mmụta sayensị na-eduzi ụwa nke na-akọwa ihe mere ị ga-eji lee foto ndị na-akpali agụụ mmekọahụ anya dị ka ihe na-eri ahụ. Ọ bụ ọtụtụ ndị na-eme nchọpụta dere ya na nsogbu omume mmekọahụ. Ọ na - ajụ ma nyocha CSBD ọhụrụ ọ dị n'okpuru otu "Nsogbu Nchịkwa Mgbagha", ebe ọ bi ugbu a. Ndị edemede ahụ na-atụ aro na nkwado kachasị dị, nkwado dị ugbu a bụ maka CSB dị ka 'nsogbu riri ahụ.'
Nke a bụ ihe dị mkpụmkpụ, nke na-ewusi ụmụaka maka ịṅụ ọgwụ ọjọọ. Nke a bụ a ogologo oge nke ahụ na-akọwa ihe ndị bụ isi.
Ọtụtụ n'ime nsogbu ndị a na-enwe mmetụta dịka 'nsụgharị' nchịkwa nke ụgwọ ọrụ nkịtị ma ọ bụ ihe ndị na-eme ka ihe oriri, njikọkọ, na mmekọahụ nwee ume. Nri nri nri na oke nnu, shuga na abụba bụ nri 'supernormal' na ego nke ụgwọ ọrụ calorie dị elu na-enye ụbụrụ maka ụkọ; mgbasa ozi ọha na eze dị ka nsụgharị na-abawanye na njiko, ọtụtụ narị 'enyi' na pịa; na internet porn na ya na-adịghị agwụ aghara nke 'ụmụ ọkụ na-ekpo ọkụ' njikere bụ ụdị supernormal nke mmekọahụ.
N'iji ọgwụ ọjọọ eme ihe, ndị ọrụ chọrọ nrịzi elu dị elu iji nweta otu 'kụrụ' ahụ. Na ịntanetị, ndị ọrụ oge ga-achọ ihe ọhụrụ ma ọ bụ ike ka ha nwee mmetụta dị otu a. Ụlọ ọrụ porn na-enwe nnọọ obi ụtọ iji nye nke a.
Dika ngwugwu dopamine na echere ugwo 'ugwo olu' ya, ngwa ngwa oghapu ala mgbe enwere ugwo. Ndị ọrụ kwesịrị ịnọgide na-ịpị ihe ederede iji mee ka ụgwọ ọrụ na-abịa. Ọ bụrụ na anyị anọgide na-amanye ụbụrụ iji mepụta nrụpụta mgbe niile, ọ na-emesi usoro ahụ ike ma na-egbochi mmepụta dị ka ihe nchekwa. Otú ọ dị, ọ bụrụ na anyị anọgide na-agba ụra, ụbụrụ ahụ kpebiri na nke a aghaghị ịbụ ihe mberede maka ebumnuche nlanarị ma gbochie usoro ya ('ezuola'). N'aka nke ya, ogo dị elu nke dopamine na-ebute ntọhapụ nke protein a na-akpọ Delta Fos B. Nke a na-ewuli elu n'ime usoro nkwụghachi ụgwọ anyị na-eme ka ụbụrụ anyị nwee ike inyere anyị aka ilekwasị anya, cheta ma meghachi ụgwọ a dị mkpa.
Ejikọtara njirimara anọ na mgbanwe nke anụ ahụ na ụbụrụ na-arụ ọrụ dịka usoro nke usoro ahụ riri ahụ. Ndị a bụ:
• Usoro njikwa mkpali - Hypofrontality
• Nsochi nsogbu nrụgide
'Desensitisation' bụ nzaghachi na-emetụ n'ahụ na-atọ ụtọ, karịsịa maka ụgwọ ọrụ nkịtị, dịka nri ma ọ bụ mmekọrịta na ndị ọzọ. Ọ na-abụkarị ụbụrụ ụbụrụ mbụ na-eri ahụ na-agbanwe porn ọrụ mara. Ha na-enwe mmetụta nke ịda mbà n'obi, na-agwụ ike, na-enweghị ntụpọ. Ibelata dopamine signals na mgbanwe ndị ọzọ na-ahapụ onye ọrụ dị arọ na-adighi adọrọ mmasị na ihe ụtọ ụbọchị ọ bụla na 'agụụ na-agụ' maka ọrụ nlekota oru dopamine na ihe. Ọ dị ha mkpa inwe mmetụ ka ukwuu na nke ka ukwuu iji nweta ịzụ. Ha nwere ike iwepụtakwu oge na ntanetị, oge ntanetị site na nchịkọta, na-ekiri mgbe ị na-egbochi onwe gị, ma ọ bụ na-achọ video zuru ezu iji kwụsị. Ma nchịkwa nke ike nwere ike ịmalite ịbịakwute ụdị ọhụụ, mgbe ụfọdụ ike, onye ọbịbịa, ọbụna na-akpaghasị. Cheta: ihe ijuanya, ihe ijuanya na nchekasị na-emepụta adrenaline jack up dopamine ma nwekwuo agụụ mmekọahụ.
N'aka nke ọzọ, naanị ihe na-adọta uche anyị ma na-ewelite mmụọ anyị bụ ihe anyị chọrọ, omume riri ahụ ma ọ bụ ụdị nhọrọ. Nke a bụ n'ihi na anyị 'amatala' nke ọma na ya. Mmetụta uche na-akpali agụụ siri ike ma ọ bụ ncheta nke obi ụtọ, 'euphoric memory', mgbe arụ ọrụ. Ebe nchekwa nchekwa dị na nchekwa bụ ụbụrụ 'na-ejikọkọ ọnụ, na-agbakọta ọnụ' n'usoro. Ihe ncheta Pavlovian a nwere ọnọdụ na-eme ka ahụ riri ahụ sie ike karịa ọrụ ọ bụla ọzọ na ndụ onye ahụ riri ahụ.
Ighachitere njikọ nerve na-eme ka usoro nkwụghachi ụgwọ gbanwee nzaghachi na njirimara ma ọ bụ echiche metụtara ọgwụ ọjọọ. Ndị na-eri ọgwụ cocaine nwere ike ịhụ sugar ma chee banyere cocaine. Onye na-egbu egbu na-anụ gọọmenti iko ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ na-esi ísì mgbe ọ na-agafe ụlọ ahịa ma ozugbo chọrọ ịbanye.
N'ihi na ịntanetị ịṅụ ọgwụ ọjọọ, ihe ọmụma dịka ịgbanwu kọmputa, ịhụ na ịpụta elu, ma ọ bụ ịbụ nanị ụlọ, na-akpali ọchịchọ siri ike maka porn. Ọ bụ onye na mberede mpi elu (ezi libido) mgbe nwunye ya, nne ya ma ọ bụ ụlọ ahịa ya na-ere ahịa? Eleghi anya. Ma o nwere ike iche na ọ nọ na autopilot, ma ọ bụ onye ọzọ na-achịkwa ụbụrụ ya. Ụfọdụ na-akọwa nzaghachi nke porn dị ka 'ịbanye n'ime oghere nke nwere naanị otu ụzọ mgbapụ: porn'. Ma eleghị anya ọ na-enwe mmetụta ọsọsọ, ọsọ ọsọ ngwa ngwa, ọbụna na-ama jijiji, na ihe ọ bụla ọ na-eche n'echiche na-abanye na ebe nrụọrụ weebụ kachasị amasị ya. Ndị a bụ ihe atụ nke ụzọ ụbụrụ a na-ahụ maka ahụ riri ahụ na-eme ka usoro ụgwọ ọrụ ahụ kwadoro, na-eti mkpu, "meenụ ya ugbu a!" Ọbụna ihe ize ndụ nke ime mkparịta ụka mmekọahụ agaghị egbochi ha.
Ebumnobi mmadụ, ma ọ bụ belata ụbụrụ na mpaghara ndị dị na mbụ, na-eme ka ike gwụ ma ọ bụ njide onwe onye, ​​na-enwe mmetụta siri ike nke enweghị isi. Nke a na-eme site na ntụgharị nke isi awọ na ihe ọcha, na mpaghara ndị dị n'ihu. Nke a bụ akụkụ nke ụbụrụ nke na-enyere anyị aka ịmegharị ụkwụ na nhọrọ ndị na-adịghị mma maka ịmebe oge anyị. Ọ na-enyere anyị aka ịsị 'ọ dịghị' onwe anyị mgbe anyị chere ọnwụnwa. Na mpaghara ebe a dara, anyị nwere ike ịkụpụta ihe. O nwere ike iche na ị na-aga agha. Ụzọ a na-ahụ anya nke na-eti 'Ee!' ebe ụbụrụ dị elu na-asị 'Ee e! Ọ bụghị ọzọ! ' Na akụkụ ndị isi na-achịkwa ụbụrụ na-ada mbà, ọnọdụ ahụ riri ahụ na-enwetakarị.
Ndị nọ n'afọ iri na ụma na-edozi ahụ ike. Ọ bụghị nanị na ha nwere ọtụtụ dopamine na-akwọ ha ka ha wee nwee ihe ize ndụ (pedal accelerator na-ada mbà n'obi), ma ndị lobes frontal ezughị ezu, (frek adịghị arụ ọrụ nke ọma).
Mgbochi nrụgide dysfunctional. Nke a na-eme ọbụna obere nrụgide na-eduga n'ịchọsi ike na nlọghachi n'ihi na ha na-emepe ụzọ ndị dị ike.
Ihe ndị a dị na isi nke ọgwụ ọjọọ niile. Otu onye omekorita na-agbakee na-agbakpọ ha ọnụ: 'Agaghị m enweta ihe na-adịghị eju m afọ na ọ dịghị mgbe ọ bụla na-eju m afọ'.
Dhapụ. Ọtụtụ ndị kwenyere na ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na-agụnye mgbe niile ndidi (mkpa maka mkpali maka inwe otu mmetụta ahụ, nke ọrịa desensitisation kpatara) na mgbaàmà iwepụ obi ọjọọ. N'ezie, ọ dịghịkwa mkpa maka ahụ riri ahụ - ọ bụ ezie na ndị na-egwu egwu taa na-ekwukarị ma. Kedu ihe nyocha nke ị addictionụ ọgwụ ọjọọ riri ahụ bụ, 'nọgidere na-eme ihe ọ sọkwara ya pụta'. Nke ahụ bụ ihe akaebe a pụrụ ịdabere na ya nke riri ahụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ozi gbasara nchọpụta banyere ndidi na ịgbatị, pịa Ebe a (saịtị mpụga, mepee na windo ọhụrụ).
<< Iri Mmadụ Ahụ Iweghachite >>